राधाले श्रीकृष्णसँग यसकारण विवाह गर्न अस्विकार गरेकी थिइन् राधाले श्रीकृष्णसँग यसकारण विवाह गर्न अस्विकार गरेकी थिइन्
राधाले श्रीकृष्णसँग यसकारण विवाह गर्न अस्विकार गरेकी थिइन्
जतिबेला प्रेमको उदाहरण दिइन्छ राधाकृष्णको प्रेमबारे सबैभन्दा धेरे चर्चा हुन्छ । राधा–कृष्णको प्रेमलाई जीवात्मा र परमात्माको मिलन भनिन्छ । शताब्दीदेखि राधा–कृष्णको प्रेम कहानी पढ्दै आइएको छ तर जब हामी राधा–कृष्णको प्रेम कहानी सुन्छौं, तब कृष्णले राधासँग किन विवाह गरेनन् भन्ने सोच्छौं । यसका विभिन्न व्याख्या दिइएका छन् ।केही विद्वानका अनुसार राधा–कृष्णको कहानी मध्यकालको अन्तिम चरणमा भक्ति आन्दोलनपछि लोकप्रिय भएको हो । त्यतिबेलाका कविले यो आध्यात्मिक सम्बन्धलाई एक भौतिक रुप दिए । प्राचिन समयामा रुक्मिनी, सत्यभामा, समेथा श्रीकृष्णामसरा प्रचलित थियो जसमा राधाबारे कुनै जानकारी उपलब्ध छैन । ३२२८ इसा पूर्व देवकी पुत्र श्रीकृष्णको जन्म भयो । केही समयपछि उनी गोकुलमा बसे र त्यसपछि वृन्दावन गए ।श्रीकृष्णले राधालाई १० वर्षको उमेरमा भेटेका थिए । त्यसपछि उनी कहिले वृन्दावन फर्किएनन् । त्यसबाहेक राधाले द्वारिकाको यात्रा गरेको भन्नेबारे पनि कहीँ कतै उल्लेख छैन । दक्षिण भारतको प्राचिन ग्रन्थमा राधाबारे कुनै जानकारी दिइएको छैन ।राधाले श्रीकृष्णसँग विवाह गर्न अस्विकार गरेकी थिइन्ः एउटा मत यो पनि छ कि राधाले श्रीकृष्णसँग विवाह गर्न अस्विकार गरेकी थिइन् किनभने उनलाई लाग्थ्यो कि उनी महलको जीवनका लागि उपयुक्त छैनन् ।राधा एक गोठाली थिइन् जबकी मानिसहरु श्रीकृष्णले कुनै राजकुमारीसँग विवाह गरुन् भन्ने चाहना राख्थे ।श्रीकृष्णले राधालाई सम्झाउने निकै कोसिस गरेका थिए तर राधा आफ्नो निश्चयमा दृढ थिइन् ।एक अन्य प्रचलित व्याख्या अनुसार राधाले एकपटक श्रीकृष्णलाई किन आफूसँग विवाह गर्न
नचाहेको भनेर प्रश्न गरिन् ।तब कृष्णले राधालाई आफ्नै आत्मासँग कसैले विवाह गर्न सक्छ र ? भनेर सोधे । कृष्णको आशय थियो कि उनी र राधा एकै हुन् । उनीहरुको भिन्न–भिन्न अस्तित्व छैन ।राधालाई श्रीकृष्ण भगवान हुन् र उनी श्रीकृष्णको एक भक्त भएको महसुस भइसकेको थियो । उनी भक्तिभावमा डुबिसकेकी थिइन् । त्यसकारण केहीको मान्यता अनुसार राधा र कृष्णबीच विवाहको प्रश्न नै उठ्दैनथ्यो । राधा र कृष्णबीचको सम्बन्ध एक भक्त र भगवानको हो । राधाको श्रीकृष्णसँग भिन्न अस्तित्व छैन । विवाहका लागि दुई व्यक्तिको आवश्यक हुन्छ ।समाज बीचमा आयोः केही मानिसहरुले यो पनि भन्छन् कि सामाजिक नियमले राधा–कृष्णको प्रेम कहानीमा खलनायकको भूमिका निभायो । राधा र श्रीकृष्णको सामाजिक पृष्ठभूमिले उनीहरुको विवाहको लागि अनुमती दिँदैनथ्यो ।राधालाई राम्रो तरिकाले बुझ्नका लागि रस र प्रेमको रहस्य बुझ्नुपर्छ । यो आध्यात्मिक प्रेमको आनन्ददायक अनुभूती हो । एक व्याख्या अनुसार कृष्ण र राधाले बाल्यकालमा खेल्दाखेल्दै विवाह गरेका थिए तर वास्तवमा उनीहरुको कहिले पनि विवाह भएन ।हुन पनि उनीहरुको प्रेम वैवाहिक जीवनको प्रेमभन्दा बढी स्वाभाविक र आध्यात्मिक थियो ।कृष्ण र राधा एकअर्कासँग आत्मीय रुपमाजोडिएका थिए त्यसकारण सधैं उनीहरुलाई राधा–कृष्ण भनिन्छ, रुक्मिनी–कृष्णा होइन ।रुक्मिनीले पनि कृष्णलाई पाउन धेरै नै पापड बेल्नुपरको थियो ।उनी आफ्ना भाइ रुकमीविरुद्ध गइन् । रुक्मिनी पनि कृष्णलाई राधाले झैं प्रेम गर्थिन् ।
रुक्मिनीले श्रीकृष्णलाई आफूलाई सँगै लैजान आग्रहसहित प्रेमपत्र लेखेकी थिइन् ।प्रमेपत्रमा रुक्मिनीले सातवटा श्लोक लेखेकी थिइन् । रुक्मिनीको प्रेमपत्रले कृष्णको मन छोयो जसका कारण उनले अनुरोध स्विकार गरे । यसरी रुक्मिनी श्रीकृष्णकी पहिलो श्रीमती बनिन् ।राधा श्रीकृष्णको बाल्यकालको प्रेम थिइन् । त्यसपछि जिन्दगीभर उनले श्रीकृष्णलाई भेटिनन् । राधा श्रीकृष्णको दैवीय गुणसँग परिचित थिइन् । उनले जिन्दगीभर आफ्नो मनमा प्रेमको स्मृतीलाई ताजा राखिन् । यो नै उनीहरुको सम्बन्धको सबैभन्दा उत्कृष्ट पक्ष थियो ।के श्रापले राधा–कृष्णको मिलन हुनबाट रोक्यो ? ब्रह्मवैवर्त पुराण अनुसार पृथ्वीमा आउनुअघि राधाको एकपटक कृष्णकी सेविका श्रीदामासँग बहस भएको थियो । राधारानी क्रोधित भइन् र श्रीदामालाई राक्षसको रुपमा पैदा हुन श्राप दिइन् । त्यसको बदलामा श्रीदामाले पनि राधालाई एक मानवको रुपमा जन होस् र आफ्नो प्रेमीसँग सय वर्षका लागि बिछोड होस् भन्दै श्राप दिए ।यस्तो पनि मान्यता छ कि श्रीकृष्णले राधालाई यसकारण पनि विवाह गरेनन् किनभने उनीहरु प्रेम र विवाह दुई भिन्न भिन्न कुरा हो भनेर पुष्टि गर्न चाहन्थे । प्रेम एक निःस्वार्थ भावना हो जबकी विवाह एउटा सम्झौता र अनुबन्ध हो । एक मत अनुसार श्रीकृष्णले मानव जातीलाई निःस्वार्थ र आन्तरिक प्रेमलाई सिकाउनका लागि राधासँग विवाह नगरेका हुन् । राधाकृष्णको सम्बन्ध कहिले पनि भौतिक रुपमा रहेन । यो निकै आध्यात्मिक प्रकृतिको हो । पौराणिक कथामा प्रचलित अन्य कथाको तुलना राधा–कृष्णसँग गर्न सकिन्नँ ।